Bannaanbaxyo Ballaaran Oo Gil-Gilay Magaalooyin Ka Tirsan Dowlad Degaanka Soomaali Galbeed | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Bannaanbaxyo Ballaaran Oo Gil-Gilay Magaalooyin Ka Tirsan Dowlad Degaanka Soomaali Galbeed
Bannaanbaxyo waa weyn ayaa gil-gilay Magaalooyin ka tirsan Dowlad Degaanka Soomaali galbeed, waxana wadooyinka iyo fagaarayaasha ku yaalla magaalooyinka Dowlad degaanka hadda ka socda bannaanbax aan loo kala harin.
Bannaanbaxa oo ah mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ka socda Magaalooyinka ugu waa weyn Dowlad Degaanka, waxaana ka mid ah meelaha sida weyn la isugu soo baxay Magaalada dhaxanbuur iyo Qabridahar oo mid ah Magaalooyinka ugui dadka badan degaanka Soomaalida ayaa haatan la ciir-ciiraya isku soo baxyo waa weyn.
Dadka ayaa bannanbaxa waxaa ay uga soo horjeedaan Tigreega haatan dagaalka kula jira Dolwadda Federaalka Itoobiya, waxaana ay wataan Boorar ay ku qoran yihiin hadallo ka dhan ah TPLF oo xasuuq badan u gaysatay umadda Soomaaliyeed, haatanna dagaal kula jira Dowladda dhexe ee itoobiya.
Dadka ayaa sheegay in ay Cambaareynayaan guud ahaanba gabood faalladii ay Tigreegu ay u gaysteen dadka Soomaaliyeed.
Dalka Itoobiya aya haatan waxaa ka taagan dagaallo u dhexeeya TPLF iyo Dowladda dhexe ee waddaankaas.